Qalabka Gemlight Goynta Qalabka Co., Ltd. waxaa la aasaasay 1990, warshadda cusubna waxaa laga dhisay 2000 oo ku taal Shuangtian Industrial Park, Dinngningdian Town, Dingzhou City. Warshadda cusubi waxay soo koobeysaa aag dhan 12000 mitir murabac ah waxayna dhaaftay shahaadooyinka nidaamka caalamiga ah sida ISO9001: 2015, ISO14001: 2015, ISO45001: 2018, waxayna heshay TUV, shahaadooyinka warshada SGS.
Waxaan haynaa laba xariiq oo lagu aqoonsan yahay deminta iyo kuleylka daaweynta kuleylka, oo u adeegsada gaaska dabiiciga ah iyo korantada tamar kuleylinta si loo ilaaliyo deegaanka loona hagaajiyo jawiga shaqada ee shaqaalaheena. 40,000 oo baangado ayaa maalin walba lagu daaweeyaa labada xariiq, waxaana ku qalabeysan nahay shan shaqaale maamul oo tayo leh si aan si buuxda u hubino in fidnaanta, adkaanta iyo adkaanta garbaha ay ka soo baxaan heerarka warshadda.
Iyada oo leh laba xariiq oo lagu aqoonsan yahay daminta deegaanka iyo khadadka daaweynta kuleylka, labada khad kululeyn waxaa lagu daaweeyaa 40,000 oo baangado ah maalintii. Labada sadar waxay u isticmaalaan gaaska dabiiciga ah iyo korantada tamarta kuleylka, iyagoo si wax ku ool ah u yareynaya wasakhda iyo wasakhda wasakhda, nadiifinta deegaanka shaqada ee shaqaalaha iyo yaraynta qiiqa. Iyada oo 5 shaqaalaha baaritaanka QC damaanad qaadaya flatness, adkaanta iyo adkaanta a of garbaha, si dhammaan waxyaabaha ka tagaya warshadda la kulmaan heerarka warshad.
Iyadoo 10 R & D dadku mas'uul ka yihiin taageerada farsamo ee qalabka warshadda. Hayso ilaa 12 shati nooca utility-ga ah. Iyada oo waaxda dayactirka farsamada iyo waaxda R & D, ay si isdaba-joog ah u ikhtiraacaan uguna hal-abuuraan. Tayada warshadaha si hufan ayaa loo damaanad qaadi karaa, iyo wax-soo-saarka wax-soo-saarka si loo hagaajiyo, loo yareeyo kharashyada wax soo saarka, si looga faa'iideysto inta badan macaamiisha.
Waxaan u hoggaansameynaa fikradda ah "Tayada waa nolosha", waxaan u hoggaansameynaa sharafta ganacsiga, oo leh alaab iyo adeegyo heer-koowaad ah macaamiisha adduunka!